Finland markii uu ilmuhu dhaso - InfoFinland
Marka uu cunug qoys ugu dhasho Finland, waa in isbitaalka looga diiwaangeliyaa nidaamka macluumaadka dadka. Waalidku waa in ay magaca cunugga iyo afkiisa hooyo ku wargeliyaan Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Jinsiyadda uu cunuggu helay waxay ku xiran tahay jinsiyadda waalidka.
Ogeysiinta macluumaadka cunugga
Ilmuhu waa in uu lahaadaa waalid
Dhalashada cunugga waxaa isbitaalka looga diiwaangeliyaa nidaamka macluumaadka dadka ee Finland, marka uu cunuggu dhasho. Waxaa islamarkaas cunugga loo qorayaa aqoonsiga qofka. Tan waxaa la samaynayaa haddii:
hooyadu leedahay Guri degmo ee gudaha Finland iyo haddii ay
hooyadu leedahay lambarada aqoonsiga dhalashada ee Finnishka.
Haddii hooyadu aysan ka diiwaan gashaneyn Finland, isbitaalku ma diiwaangelin karo dhalashada ilmaha. Markaas waxaad tilmaanbixinno ka codsataa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Macluumaadka cunugga waxaa lagu ogeysiiyaa foomka. Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ayaa hooyada foomka ugu soo diraysaa guriga waxyar kaddib dhalashada cunugga. Foomka waxaa ku qoran lambarada aqoonsiga dhalashada ee Finnishka.
Waxaad foomka ku soo ogeysiinaysaa:
Foomka si taxadar leh u buuxi ka dibna sixiix. Haddii waalidku ay is qabaan ama waalidnimada la xaqiijiyay, waa inay labada waalidba foomka sixiixaan.
Foomka ku celi Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka saddex bilood gudohood laga soo bilaabo markii uu ilmuhu dhashay. Haddii cunugga xubin looga dhigayo jimciyad diimeed, u celi foomka jimciyadda lagu darayo. Foomka waxaad ku celin kartaa boostada, isagoo iimayl ku lifaaqan ama waxaad si toos ah u geyn kartaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow.
Macluumaada foomka waxaa lagu kaydinayaa nidaamka macluumaadka dadka cunuggaadana waxaad u heleysaa kaarka Kelada oo boostada laguugu soo dirayo.
Ogeysiinta macluumaadka cunuggaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Finland waxaa ka jira sharciga magaca. Sida uu qabana dhamman dadku waa inay lahaadaan magaca qoyska iyo 1-4 magac horaad. Magacyada hore waa inay ahaadaan kuwo waafaqsan sharciga Finland. Tusaale ahaan walaalaha looma bixin karo magac koowaad oo isku mid ah.
Cunuggu wuxuu magaca qoyska ka qaadanayaa waalidiintiisa.
Haddii ay waalidku leeyihiin magac qoys ama magac qoys oo la isku xiray, cunuggana wuxuu u noqonayaa magaciisa qoyska.
Haddii uu cunuggu leeyahay hal waalid oo kaliya, wuxuu cunugga qaadanayaa magaca qoyska ee waalidkaas.
Haddii ay labada waalid kala tageen, mas’uulka ilmaha ayaa go’aan ka gaaraya magaca ilmaha.
Haddii waalidku ku heshiin waayaan magaca qoyska ee loo bixinayo ilmaha, markaas ilmuhu wuxuu qaadanayaa magaca qoyska ee hooyada.
Haddii ay waalidiintu is qabaan, waxey cunuggooda u dooran karaan magaca qoyska ee labada lammaane kii ay doonaan ama magac qoys oo la isku xiray.
Haddii aysan waalidku is qabin, wuxuu cunuggu qaadan karaa magaca qoyska ee hooyada ama aabaha, haddii aabonimada ama hooyonimada hooyada aan dhalin la xaqiijiyay. Haddii aan waalidnimada la xaqiijin, cunuggu wuxuu qaadanayaa magaca qoyska ee hooyada.
Cunugga koowaad ee ay waalidku isu dhalleen waxaa la siin karaa isku xirka ka samaysmay magacyada qoyska ee waalidka ama magaca kale ee magaca qoyska isku xiran ee labada waalidkood.
Marka uu cunuggu dhasho waa in loo diiwaangeliyaa afkiisa hooyo. Hal luqad oo kaliya ayaad u dooran kartaa afka hooyo ee cunugga. Haddii aad dooneyso waxaad gadaal ka beddeli kartaa luqada.
Ka fikir luqada aad dooneyso in aad u diiwaangeliso cunuggaada. Waxey saameyn ku yeelan kartaa luqada laga yaabo in uu cunuggu dugsiga ku dhigto.
Haddii afka hooyo ee cunuggaadu uu yahay wax ka duwan Finnishka ama Iswidhishka wuxuu Finnishka ama Iswidhishka u baranayaan sidii luqada labaad oo kale ee waxbarashada S2. Waxaad taas dheer in cunuggaadu uu baran karo luqadda ugu qoran in ay tahay afkiisa hooyo. Barashada afka hooyo waa mid aan khasab aheyn.
Cunuggu wuxuu marka uu dhasho ku helayaa dhalashada Finland dhacdooyinka soo socda:
Hooyada ilmuhu oo ah muwaadin Finnish ah.
Aabaha ilmaha oo ah muwaadin Finnish ah iyo hooyada cunuggana ay is qabaan.
Ilmaha oo Finland ku dhashay, aabihiis waa muwaadin Finnish ah, aabanimadana waa la xaqiijiyay.
Ilmaha oo ku dhasha Finland isagoo lamaane dumar ah ugu dhashay daaweynta bacriminta dhalmada, hooyada aan isaga dhalin oo muwaadin Finnish ah, hooyanimada la xaqiijiyay.
Aabaha ilmaha oo dhintay ka hor intii aanu ilmuhu dhalan, laakiin markii uu dhimanaayey wuxuu ahaa muwaadin Finnish ah ayna is qabeen hooyada ilmaha dhashay.
Aabaha ilmaha oo dhintay ka hor intii aanu ilmuhu dhalan, ilmuhuna uu guur la'aan ku dhashay dalka Finland, aabenimadana la xaqiijiyey.
Ilmuhu wuxuu sidoo kale heli karaa dhalashada muwaadinnimada Finnishka, haddii uu Finland ku dhashay isla markaasna uusan waalidiintiisa ka helin dhalashada muwaadinnimada wadan kale. Markaas Xaafiiska dadka dalka u soo guurey ayaa cadeynaya muwaadinnimada ilmaha.
Haddii ilmuhu uusan qaadanayn dhalashada Finnishka, markii uu dhasho, baasaboor uga dalab safaaradda wadankaaga. Tan awgeed waxaad Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka uga baahanaysaa shahaadada dhalashada ilmaha.
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku waxay nidaamka macluumaadka dadka ugu baahan tahay macluumaadka dhalashada cunugga. Haddii loo baahdo Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku waxay Hoggaanka socdaalka ka ogaan kartaa dhalashada cunugga ugu dambayn saddex bilood ka dib dhalashada cunugga. Waxaad sidoo kale naftaadu Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ku wargelin kartaa dhalashada cunugga, marka aad baasaboor cunugga u hesho.
Markaas ka dib ilmuhu wuxuu u baahanayaa ruqsada deganaanshada ama diiwaangelinta xuquuqda deganaanshada muwaadiniinta EU’da.
Haddii ilmuhu uu ku jiro xayndaabka Ammaanka bulsho ee Finland, wuxuu helayaa kaarka Kelada ama kaarka caymiska jirada. Kelada ayaa kaarka guriga ugu soo direysa, marka macluumaadyada cunugga lagu kaydiyo nidaamka macluumaadka dadka.
Kelada si gaar ah uga dalbo lacagaha kaalmada qoyska. Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira mawduucan ka akhriso bogga InfoFinlandi Kaalmaynta hooyada uurka leh iyo Kaalmada dhalashada ilmaha kadib.
Xarunta hooyada iyo dhallaanka ayaa horay aabenimada looga xaqiijin karaa inta uu ilmuhu uurka ku jiro ama markii uu ilmuhu dhasho ka dib oo la booqanayo dano-ilaaliyaha carruurta ee degmadaada. Haddii aabenimada la xaqiijinayo ka hor inta uusan ilmuhu dhalan, markaas falanqaynta arimaha aabenimadu waxay bilaabanaysaa ka dib marka dhalashada ilmaha ay ka soo wareegto 30 maalmood. Aqoonsiga aabenimada waxaa xaqiijinya Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira mawduucaan ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Wada deganaansho.
Mas’uulku waa hooyada cunugga dhashay, haddii waalidiinta ilmuhu aysan is qabin, aabenimadana ama hooyinimadana aan la aqoonsan. Markaas hooyada ayaa kaligeed go’aan ka gaareysa dhammaan arimaha ilmaha, haddii xittaa ay waalidku wada deggan yihiin.
Aabaha ama hooyada kale waxay mas’uulnimada cunugga helayaan marka waalidka la xaqiijiyo, haddii aabenimada ama hooyonimada lagu aqoonsado rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka kahor dhalashada cunugga. Haddii aabenimada ama hooyonimada lagu aqoonsado dhalashada cunugga kaddib dano-ilaaliyaha carruurta, waalidku waa in ay sameeyaan heshiiska mas’uuliyadda cunugga ee wadajirka ah, si labada waalid ay cunugga mas’uul uga noqdaan. Heshiiska mas’uuliyadda cunugga waxaa lagu sameeyaa dano-ilaaliyaha carruurta ee degmada.